डाक्टरले मृत घोषणा गरेर पोष्टमार्टम गर्न ठिक्क परेका युवक जब टेवलमा उठेर बसे(भिडियो हेर्नुस्) |
डाक्टरले मृत घोषणा गरेर पोष्टमार्टम गर्न ठिक्क परेका युवक जब टेवलमा उठेर बसे(भिडियो हेर्नुस्)
September 4, 2021 adminLeaveaComment on डाक्टरले मृत घोषणा गरेर पोष्टमार्टम गर्न ठिक्क परेका युवक जब टेवलमा उठेर बसे(भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ। फरवरी २७ मा भएको सडक दुर्घटनामा एक जना युवक परे । उनी मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका थिए। भारतको कर्नाटकका २७ वर्षीय सन्मुख गोमदी दुर्घटनामा परेका हुन् । अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको निधन भयो । उपचारमा संलग्न चिकित्सकले उनलाई मृ त घोषित गरे । त्यहाँ पनि उनलाई निधन भइसकेको घोषणा गरियो । उनलाई पोष्टमार्टम गर्ने कक्षमा लिएर गइयो ।तर जब चिकित्सकले उनको पोष्टमार्टम गर्न लागे उनलाई राखिएको टेवलमा केही हलचल भयो। त्यहाँ रहेका चिकित्सकहरु झस्किए । उनीहरुले ति युवकका शरिरको सबै अं ग हरुको परिक्षण गरे।
चिकित्सकले निधन भएको भनेर घोषणा गरेर पोष्टमार्टम गर्न लागिएका ति युवकको शरिर जि वि त रहेको थाहा पाए । तत्काल उनलाई आइसियुमा भर्ना गरियो । अहिले ति युवकको अवस्था सुधारउन्मुख रहेको बताइएको छ । परिवारमा शोक मनाइरहेका थिए । तर अचानक युवकको अवस्था सुधारउन्मुख रहेको थाहा पाएपछि परिवारमा खुसी छाएको छ । पुरा भिडियो हेर्न तलको फोटो मा क्लिक गर्नुहोला
यो पनि:कोरोना निको पार्ने औषधिलाई लिएर भर्खरै आयो यस्तो खबर ! छायो विश्वभर खुसियाली ! माउथवासको सम्पर्कमा आएको ३० सेकेन्ड भित्रै कोरोनाभाइरस न’ष्ट हुने तथ्य वैज्ञानिकहरुले फेला पारेका छन् । प्रयोगशालामा गरिएको अनुसन्धानमा सो कुरा पत्ता लागेको हो । माउथवास कोरोनाभाइरस न’ष्ट गर्न निकै प्रभावकारी हुने कुरा कार्डिफ युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरुले फे’ला परेका हुन्। बेलायतको वेल्समा रहेको युनिभर्सिटीको अस्पतालमा भर्ना भएका को भिड–१९ का बिरामीमाथि गरिएको क्लिनिकल ट्रायलपश्चात् यस्तो रिपोर्ट सार्वजनिक भएको हो। ** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
भत्ता सम्बन्धी सरकारले गर्यो यस्तो अनैाठो निर्णय!एक पल्ट अवश्य पढौ।